Bisadda Singapura | Bisadaha Noti
Bisadda Singapura waa jacayl xayawaan. Wuxuu jecel yahay inuu had iyo jeer la joogo daryeelkiisa, kuna raaxeysto salaaxitaankiisa iyo cayaarihiisa. Xaqiiqdii, waxaa loo yaqaan "bisad velcro" sababtoo ah ku tiirsanaanta ay ku tiirsanaan karto qoyskeeda.
In kasta oo uu kalgacal yahay haddana weli si fiican looma yaqaan, haddaba halkan waxaan ka bilaabaynaa inaan ku biirino badarkeenna ciid si ay dad badani u ogaadaan wuxuu yahay iyo daryeelka ay u baahan tahay bisadan quruxda badan.
1 Asalka iyo taariikhda bisadda Singapura
4 Daryeelka bisadda Singapura
4.0.4 Daryeelka caafimaadka xoolaha
4.0.5 Shirkad iyo kalgacal
5.1 Miyaa loo heli karaa korsasho?
Asalka iyo taariikhda bisadda Singapura
Asalka noocani wuxuu ku yaal Singapore, halkaas oo tijaabooyin badan ay weli ku nool yihiin maanta dhul-duur-joog ah. Sanadkii 1975 Hal iyo Tommy Meadow oo ka yimid California waxay go'aansadeen in afar bisadood la keeno Mareykanka. TommyIntaa waxaa dheer inuu ahaa abuure ka mid ah bisadaha Abyssinian, Burmese iyo Siamese, wuxuu sidoo kale ahaa garsoore dhammaan noocyada, sidaa darteed, isaga iyo xaaskiisa, sameeyey wax kasta oo suurtagal ah si Singapura looga dhigo North America oo dhan, u qaadista bandhigyada.
Dhowr sano kadib, 80-yadii, bisadda Singapura waxaa loo aqoonsaday inay tahay nooc TICA iyo CFA. Xilliganna, waxay ku jirtaa kaalinta 22aad caan ka mid ah 41 ee ku qoran Ururka 'Cat Breeders Association'.
Cimrigoodu waa 12-14 sano.
Waa bisad yar in miisaankeedu kama badnaan 2kg (dumar) ama 4kg (lab). Waxay leedahay jidh adag oo muruqyo ah, oo madaxa wareegsan iyo "M" foodda hore. Indhuhu waa yicib u eg, jaakaduna waa gaaban tahay, xardhan tahay, siman tahay, jilicsan tahay iyo midab bunni ah.
Dabada ayaa si fiican loogu qaybiyay jirka intiisa kale. Dhagahooduna waa saddexagal.
Waa dhogor aad u jecel kuwaas oo jecel inay ku hareeraysan yihiin kuwa ay jecel yihiin. Wuxuu ka helaa inuu la baashaalo daryeelayaashiisa, haku ciyaaro xarig ama fadhiga sariirta. Sidoo kale, cabirkeeda oo yar awgeed wuxuu sifiican ulaqabsadaa inuu ku noolaado guri dabaq ah ilaa inta daryeelka aasaasiga ah la bixinayo in bisad kastaa u baahan tahay.
Mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaanan waligeen sameynin waa inaan u maleyno inaadan u baahnayn jimicsi, maxaa yeelay waa doofaarro tamar badan leh. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in guriga loo waafajiyo midka dhogorta leh, isagoo dhigaya armaajo meelo kala duwan si uu ugu soo boodo oo uu adduunkiisa uga arko meel u gaar ah, iyo in dadka guriga ku nool ay ku raaxaystaan ​​inay wax ku qabsadaan wax yar saaxiib weyn dhogorta.
Daryeelka bisadda Singapura
Si ay u noqoto bisad faraxsan, waxay u baahan doontaa inaad daryeesho sida soo socota:
Ahaanshaha xayawaan cunno cuntadiisa aasaasiga ahi waa inay ahaato hilib. Sidaa darteed, haddii aad quudiso, waxaa si weyn lagugula talinayaa inaysan ku jirin badarka ama wax soo saarka. Ikhtiyaar kale ayaa ah in la siiyo Yum Cunto loogu talagalay Bisadaha, ama Barf iyada oo gacan laga helayo nafaqeeye nafaqada xoolaha.
Pelo: waxay ku filnaan doontaa inaad cadayato hal mar maalintii.
Indhaha: hal mar 2-3dii maalmoodba mar ayaa lagu talinayaa in lagu nadiifiyo faashad qoyan oo leh camomile diiran. Isticmaal faashad nadiif ah il kasta.
Dhegaha: usbuuciiba hal mar waa inaad ku nadiifiso dhagta iyadoo isha indhuhu hoos ugu dhacaan dhagaha iyo faashad nadiif ah oo loogu talagalay dhag kasta.
Maalin kasta waxaad u baahan tahay inaad ciyaarto. Dukaamada xayawaanka waxaad ka heli doontaa noocyo badan oo ah Alaabta carruurtu ku ciyaaraanLaakiin hadaad haysato kartoon uu isagu la qabsan karo oo uu si habsami leh u jiifsan karo, samee laba god oo uu ka soo geli karo kana bixi karo waxaadna arki doontaa baashaalka uu leeyahay.
Daryeelka caafimaadka xoolaha
In kasta oo ay tahay nooc caafimaadkiisu wanaagsan yahay, tani macnaheedu maahan inaysan waligood bukoon karin. Haa haaHaddii aad ka shakido inuu caafimaad qabo, waa inaad u geysaa dhakhtarka xoolaha si aad u baarto una daweyso.
Shirkad iyo kalgacal
Waxaa laga yaabaa inay tahay waxa ugu muhiimsan. Haddii aadan isaga siin jacayl ama daryeelin isaga, wuxuu dareemi doonaa wax aad u xun oo laga yaabo inuu xitaa joojiyo inuu doonayo inuu horay u sii socdo..
Bisadda Singapura waa xayawaan qaali ah. Sidaa darteed, lama yaabi doonno haddii aad rabto inaad la wadaagto dhawr sano oo noloshaada ah dhogorta quruxda badan. Si kastaba ha noqotee, haysashada xayawaan, wax kastoo ay tahayba, waa masuuliyad weyn. Sidaa darteed, si looga fogaado dhibaatooyinka, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in laga hubiyo qoyska si loo arko haddii ay iyaguna diyaar u yihiin inay ku daryeelaan oo ay ku jeclaadaan.
Marka go'aanka la gaaro, markaa waxaad bilaabi kartaa raadinta saaxiibkaa cusub ee afarta lug leh. Dabcan, waa inaad ogaataa in xirfadleyda xirfadleyda ah ay yar yar ka iibiyaan eeyaha 800 euros. Qiimahaani wuu ka yaraan karaa dukaanka xayawaanka.
Miyaa loo heli karaa korsasho?
Inta badan maahanUgu yaraan maahan bisadaha Singabuur saafi ah, maadaama taasi ay dhab tahay sababta xirfadlayaashu isugu dayaan inay sameeyaan wax kasta oo macquul ah si ay u ilaashadaan. Waxaad ka heli kartaa noocyo isku dhafan hoyga xayawaanka ama urur.
Ma jeceshahay inaad aragto sawirro badan oo ka mid ah bisadda Singapura? Hagaag, in la dhammeeyo, uma maleyneyno inay ka fiican tahay inaan kaa tago sawirro badan:
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Bisadda singapura
Goorma ayaa la siiyaa bisad si loo korsado?